ISonos Move, isikhulumi esisha seSonos siya phesheya | Izindaba zamagajethi
USonos uyaqhubeka nokusebenza ukunikela ngempi enhle yezinye izindlela ngokuya ngomsindo wekhwalithi ephezulu nekhwalithi ephezulu, sibe nentokozo yokuhlaziya amadivayisi abo amaningi futhi kulokhu asikwazanga ukuphuthelwa ukwethulwa kwabo kwakamuva, iSonos Move. Sikhuluma ngesipikha esisha sangaphandle seSonos ngebhethri elizimele futhi manje futhi ngeBluetooth, hlala uhlolisiswa ngokujulile. Njengenjwayelo, sizokutshela ngamaphoyinti abalulekile ale divayisi eyingqayizivele ethathe ithuba elikhulu lokushintsha isikulufa kunqubomgomo yeSonos kuze kube manje, futhi lokho ukuthi abanamadivayisi we-Bluetooth kukhathalogi yabo, ingasaphathwa ngebhethri .
Njengakwezinye izikhathi, Sihambisana nalokhu kuhlaziywa nevidiyo lapho uzokwazi khona ukubona ukungabikho kwebhokisi, okuqukethwe ebhokisini nokuthi i-Sonos Move yakhiwe kanjani futhi isebenza kanjani, ithuba elihle lokuyibuka ngaphambi nje kokulandela lokhu kuhlaziywa okujulile kanye nedatha yezobuchwepheshe ngqo kule webhusayithi.
1 Izici ze-Sonos Move technical
2 Idizayini: Ngokuhambisana nalokho obekukade kwenziwa ngumkhiqizo
3 Yakhelwe ukugcina: IP56 nebhethri elisusekayo
4 I-Sonos endala, manje ene-Bluetooth
Izici ze-Sonos Move technical
Ngaphambi kokuqala ukuhlaziya ukwakheka, ake sibheke imininingwane yezobuchwepheshe, sithola isipikha esinaso izikhulisi ezimbili zedijithali D, i-tweeter, i-mid-woofer nemibhobho emine esingaxhumana ngayo. Inokuxhuma kwe-Bluetooth 4.2, i-WiFi 802.11 b / g / n, ne- Ukuxhaswa kwe-AVRCP, SBC ne-AAC. Vele, ezingeni lobuchwepheshe, le Sonos Move akufanele iswele lutho futhi kubonakala sengathi izokwenza.
Asinayo imininingwane yezobuchwepheshe ezingeni lamandla kuma-decibel, njengoba kujwayelekile kumkhiqizo, kepha engingakuqinisekisa ukuthi kuzwakala kunamandla, futhi kuningi. Kuyinto efana ncamashi nalokho ebesikujabulela ngokwesibonelo ku-Sonos One kuze kube manje, Ngakho-ke ngokomthetho asizitholi izizathu ezinamandla zokungabaza amandla alo, izivivinyo zokuqala esizenzile bezigculisa. Ukushaja ibhetri yayo (2.500 mAh) sizosebenzisa ukuxhumana I-USB-C nesisekelo sokushaja esingu-100-240V.
Idizayini: Ngokuhambisana nalokho obekukade kwenziwa ngumkhiqizo
Sithola umkhiqizo ukuthi izinyathelo ezingama-240 x 160 x 126 millimeters, enomklamo obonakalayo futhi osivusa ngokushesha ku Sonos One. Kulokhu inakho isisindo esiphelele esingu-3 Kg kufaka phakathi ibhethri, Akuwona neze umkhiqizo olula kunayo yonke emakethe kubhekwe ukuthi isizathu sayo sokuba khona ukuphatheka, kepha kufanele sisho ukuthi isisindo luphawu lwezipikha zekhwalithi.
Phezulu sinefayela le- I-Classic Sonos Isimo Sesikhombi se-LED, kanye nokulawula ukuthinta okushelelayo ukuphatha okuqukethwe kwe-multimedia. Le yindlela esizokwazi ukusebenzisana nayo kalula, kepha okufanele ngikuqhakambise kakhulu ngomklamo wayo yiqiniso lokuthi uSonos ukhethe ukulenza libonakale, uma unokuxhumana nomkhiqizo uzolibona ngokushesha izinto zokwakha. Ngemuva, ngaphezu koxhumano lwe-USB-C esinalo imbobo encane yokuyihambisa, inkinobho yokuvula / yokuvala nenkinobho engenantambo.
Yakhelwe ukugcina: IP56 nebhethri elisusekayo
Njengesipikha esihle sangaphandle, kunjalo, kufanele sibe nezici ezithile ukuqinisekisa ukumelana kwaso, futhi lokho kungenxa yokuthi izimo eziningi zingenzeka ngaphandle okubeka ubuqotho bedivayisi engcupheni. Njengomthetho ojwayelekile, iSonos ikhiqiza amadivayisi ayo, njengeSonos One, enezici ezithile zokumelana nayo. Le Sonos Move ayinakuba ncane, isitifiketi se-IP56 esivimbela izinhlayiya zothuli futhi futhi siyaphaphalaza, yize singeke sikwazi ukuqinisekisa ukuthi ihlala ingashintshi uma siyicwilisa ngokuphelele.
Enye into efanele ukuqina iqiniso lokuthi uSonos uthathe isinqumo sokubheja ngokufaka i- 2.500 mAh ibhethri elikhishwayo, Kusho ukuthini lokhu? Yebo, ukuqina kwayo ngeke kuhambisane nempilo yebhethri, okuvame ukuba yinto yokuqala evame ukwehluleka. Esimweni esinjalo ISonos iyasiqinisekisa ukuthi singathenga ibhethri ngokwehlukana, noma ngabe sifuna ukuba nebhethri eligcinelwe ukukhulisa ukuzimela kwayo, noma uma lokho esikufunayo ngempela ukukubuyisela esikhundleni Ngoba ilahlekelwe yizimfanelo nokuzimela, kubonakala kuyimpumelelo enkulu, ngaphezu kokuyiguqula kulula kakhulu futhi iyishaja nayo, "isisekelo" sayo sokushaja, okuyindandatho encane enoxhumano lwe-USB-C silula ngokwedlulele nangokuyibeka ngaphezulu sizoba nokuzimela okudingekayo, Kungasetshenziswa futhi nakho kuxhunyiwe, kunjalo.
I-Sonos endala, manje ene-Bluetooth
Sine, kungaba kanjani ngenye indlela nge I-AirPlay 2, ukuxhumana nezinsizakalo zomculo zokusakaza ezingaphezu kwekhulu ngenxa yohlelo lokusebenza lweSonos futhi sinakho futhi imibhobho emine, okuhloswe ukusinikeza ukuhambisana okuphelele nabasizi ababili abakhulu abasemakethe, I-Alexa ne-Google Assistant, noma kunjalo kulokhu sizodinga ukuxhumana kwe-WiFi. Akunasibonakaliso, yebo, sekhono lokuphendula izingcingo. Kubhekiswa ku- ukuzimela, Okubalulekile kulolu hlobo lomkhiqizo, uSonos ufuna ukuthi siqinisekise ukufika emahoreni ayi-10 wokudlala, ezimweni ezijwayelekile nge-Bluetooth sifinyelele kalula ngehora lesishiyagalolunye, lokhu kwehla uma sisebenzisa i-WiFi, kusobala.
Lokhu kuxhumana kwe-WiFi ngokuvamile akutholakali ngaphandle, ngakho-ke sizoba nokuxhuma kwe-Bluetooth 4.2 ngendlela elula, ukuthumela umculo nokuwulawula. Lokhu kuyenza isebenzisane kakhulu futhi imele ngaphambi nangemva kweSonos. Sithole ukuthi ukuxhumana kwe-Bluetooth kulula njengoba ubungalindela kusuka ku-Sonos, futhi kumadivayisi we-iOS singabheka nokuzimela kwesipika.
NgeSonos Move sithole isikhulumi esisebenza ngezindlela eziningi kunazo zonke seSonos, bebengakaze benze into enjengale ngaphambili futhi nakanjani bebengafuni lutho olulahlekile kuyo. Lokhu kunenani, 399 ama-euro yilokho okubalwa yi-Sonos Move, futhi kuyintengo ebiza kakhulu. Njengoba kaningi ngishilo ukuthi intengo enikezwa yiSonos Beas noma iSonos One ibonakala ishibhile, kufanele ngithi iSonos Move ibukeka ibiza kimi, ngicacile ukuthi inikeza ithuba lokuba enye iSonos ekhaya okungeziwe ukukwazi ukuyikhipha endlini, kepha ngikuthola kunzima ukucabanga ukuyikhokhela ama-euro angama-399 ngayo. Iqiniso lokuthi ujwayelekile kohlobo noma ukuthi ujwayele umsindo we-premium lizoqala ukusebenza lapho uthatha isinqumo sokuthi ukwazi ukukhetha inketho eyodwa noma enye. Ngemuva kokuhlolwa, iSonos Move inikela ngomsindo onamandla nekhwalithi, idizayini nezinto zokwakha ukufanisa umkhiqizo nokuxhuma okungenamkhawulo, kungumkhiqizo oyindilinga ongase ungatholakali kuwo wonke umuntu.
Ukwakhiwa kwento nekhwalithi
Ukuzimela okukhulu nokumelana okuhle ngaphandle
Ukuxhumeka okuphelele, ngisho nabasizi abonakalayo
Ikhwalithi nomsindo onamandla
Intengo ibonakala iphakeme kimi
"Indandatho yokulayisha" mhlawumbe incane kakhulu
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » ISonos Move, isikhulumi esisha seSonos siya phesheya
Isizukulwane esisha sohlelo lokusebenza lwe-IKEA Place manje sesiyatholakala